Akụkọ - Kedu otu esi ahọrọ nri dị mma maka nkịta?
Na mgbakwunye na inye nkịta nri bụ isi nri, anyị na -ahọrọkwara ha obere nri. N'eziokwu, ịhọrọ nri nri na-emetụta ahụ ike karịa. Kedu ka anyị ga -esi họrọ nri ụmụaka maka nkịta?
Mgbe ị na -ahọrọ nri maka nkịta, anyị nwere ike họrọ site na akụrụngwa. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ na -agụnyekarị nri starchy na starchy na anụ na nri imeju. Jerky bụ ọkacha mmasị ha, ọkachasị ọkụkọ. Agbanyeghị na esichala anụ ahụ n'ụdị dị iche iche, a ga -atụkwasị ụfọdụ ihe na -esi ísì ụtọ iji nyere aka na -esi nri na ndabere a, nke ga -eme ka nkịta hụ ụdị anụ a n'anya karịa.
2. nkwakọ ngwaahịa
Ụkpụrụ maka ngwaahịa nri nri dị nchebe na ịdị ọcha n'ezie bụ: kwadebere ya na nkwakọ ngwaahịa iwu, ebipụtara na nkwakọ ngwaahịa nwere aha ika, ụbọchị mmepụta, tebụl nri nri, adreesị onye nrụpụta, nọmba ndebanye aha, nọmba ndebanye aha ụlọ ọrụ yana nọmba ogbe ndebanye aha ụlọ ọrụ na azụmahịa. , Naanị mma nri dị na ngwugwu a ka enwere ike ikwe nkwa.
3. Ịrụ ọrụ
Mgbe ị na -ahọrọ nri ndị nkịta, anyị nwekwara ike ịhọrọ site na arụmọrụ. A na -ekewa nri nri arụ ọrụ nhicha eze na chịngọm ata. A na -emekarị ha n'ụzọ pụrụ iche iji hichaa ọnụ na ezé nkịta; A na-ekewa nri na-adịghị arụ ọrụ n'ime nri nkịtị na nri na-edozi ahụ.
4. Họrọ udiri nri nri
Ọ bụrụ na udiri nri siri ike, enamel ezé nwere ike ịkacha nke ọma, na -ebute oke ezé nkịta. N'ọnọdụ ụfọdụ, mfu eze nwere ike ime ma ọ bụ mee ka mfu ezé mee ngwa ngwa.
Ọdịdị nke nri dị nro, onye nwe ya anaghị ehichakarị ezé ha ogologo oge. Ihe fọdụrụ n'ime nri dị mfe ịrapagidesi ike na ezé, nke ga -eme ka nkịta mepụta ọrịa periodontal na ume ọjọọ.
Ọ ka kwesịrị ka onye nwe ya lebakwuo anya na nri nri siri ike na nke dị nro. Ọ kacha mma ịhọrọ nri dị nro ma sie ike maka nkịta iji nyere nkịta aka wepu tartar, ma nwee ike ịkwa ikikere iji wepu ume ọjọọ.
Oge ezipụ: Jul-12-2014